Ban oo u Digay Siyaasiyiinta Somalia
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa ka digay in dunidu ay udulqaadan la'dahay khilaafka siyaasiyiinta Soomaalida.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inay isa soo tarayso sida ay ugu dulqaadan la’dahay Qaramada Midoobay khilaafka ee u dhaxeeya hogaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya.
Xoghayaha Guud ayaa hadalkan ka jeediyay Arbacadii Shalay, magaalada Addis Ababa, halkaasoo uu kaga qeybgalay shirmadaxeed ay lahaayeen Midowga Africa.
Mr. Ban ayaa ku ammaanay Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee AMISOM, waxa uu ugu yeeray “Guulaha isdaba joogga ah” ee ay ka gaareen kooxda ay Muqdisho kula dagaallamayaan ee al-Shabaab.
Laakiin waxa uu intaa raaciyay, in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo deeq-bixiyeyaasha caalamigu uu ka “dhammaanayo dulqaadka ay u hayeen xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex aloosan hoggaanka Soomaalida.”
Wuxuu sheegay in xukuumadda iyo baarlamaanka ay waajib ku tahay inay muujiyaan horumar ku aadan qorista dastuur cusub, dib u heshiin la dhex dhigo kooxaha faraha badan ee Soomaalida, bixinta adeegyada aasaasiga, iyo xoojinta amniga.
Hadalka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa soo baxay iyadoo isla shalay arbacadii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu magaalada Nairobi kula shiray dowladda KMG ah iyo maamulada Puntalnd, Galmudug, iyo Somaliland.